January 9, 2022 - Channel Lover
ဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများကို ကောလင်း pdf မှတောင်းပန်စာ…
January 9, 2022 by Channel Lover
ကောလင်း PDF မှ တောင်းပန်စာ စစ်ကောင်စီ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ! သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဘက်၊အရပ်ဘက် ဌာနများ၊ နစက ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများခင်မျာ… ကျွန်တော်တို့ ကောလင်း PDF အပေါ် စစ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေး၊ ရပ်ရွာ မီးရှို့ဖျက်စီးရေးတွေ လုပ်နေတာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ထွေထွေထူးထူး မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ဘက်ကလာတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို တော့ ကျေးဇူးပြု၍ နိုင်အောင်ပြန်ကောက်ယူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ သူတို့ကို … Read more
သင့်ရဲ့ အကြောင်းကို တစ်စုံတယောက်က ကတွေးနေပြီဆိုရင် သင့်မှာ ခံစားရမယ့် နိမိတ်များ
သင့်ရဲ့ အကြောင်းကို တစ်စုံတယောက်က ကတွေးနေပြီဆိုရင် သင့်မှာ ခံစားရမယ့်နိမိတ်များ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကြောင်းတွေးနေတာကို သိနိုင်မယ်ထင်လား… သိရော သိချင်လား…။ ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေကသင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေတွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်းတွေးတယ်ဆိုတာမှာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ တွေးနေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေ တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားတော့ သင် သတိထားနိုင်တာပေါ့။ ကဲ.. ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နှာချေခြင်း ဒီယုံကြည်မှုကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..။ တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်အကြောင်းတွေးနေတဲ့အခါ သင့်နှာခေါင်းဟာ ယားယံစပြုလာပြီး မကြာခင်ထပ်ခါထပ်ခါ နှာချေမှုကို ဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါက နေမကောင်းတဲ့အချိန်အတွက်တော့ အကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အအေးပတ်တာလည်း မရှိ နှာခေါင်း ယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက်စရာလည်းမရှိပဲ … Read more
ယင်းမာပင် ကျေးစာကျရွာကို စစ်တပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်သောကြောင့် ပြည်သူပိုင် နေအိမ် ၆လုံး ပျက်စီးကာ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရ (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၉ စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် ယမားချောင်း တံတားအောက်ဘက်မှ ခြေလျင်ဆင်းလာသော အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီခန့်တွင် ကျေးစာကျရွာအတွင်းသို့ သေနတ်များ ပစ်ဖောက်ကာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူပိုင် နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူပိုင် နေအိမ် ၆လုံး ပျက်စီးကာ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများက ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မီဒီယာသို့ ပြောဆိုသည်။ ” ကျေးစာကျရွာက အပြစ်မဲ့ပြည်သူ နေအိမ်၅လုံးကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ဖျက်စီးသွားတယ်။ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ အပြန်မှာ သူတို့ စစ်ယာဉ်တန်း မိုင်းထိတယ်။ မိုင်းထိတော့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ရမ်းပစ်တာ ရွာထဲကို ထပ်ကျပြီးတော့ နေအိမ် ၁လုံး ပျက်စီးသွားတယ်” … Read more
လမ်းမတော်ရဲစခန်းဘေးက ဗုံးပေါက်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်ပုံကို စစ်အုပ်စုက ကြောက်လန့်နေရာပြောင်း
လမ်းမတော်ရဲစခန်းဘေးက ဗုံးပေါက်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်ပုံကို စစ်အုပ်စုက ကြောက်လန့်နေရာပြောင်း #လမ်းမတော် #ရန်ကုန်တိုင်း #DeltaNewsAgency ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်ရဲစခန်းဘေးမှာရှိတဲ့ အမှိုက်ပုံမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် စစ်အုပ်စုက ကြောက်လန့်တကြား နေရာပြောင်းလိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ “ မနေ့က စခန်းဘေးက အမှိုက်ပုံမှာ ဗုံးပေါက်တယ်။ ပေါက်ပြီး ညနေပိုင်းမှာပဲ အဲ့ဒီအမှိုက်ပုံကို တစ်ဖက်လမ်းကို နေရာရွှေ့ပစ်လိုက်တယ်။ကြောက်လို့နေမှာပေ့ါဗျာ။’’ လို့ လမ်းမတော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မနေ့က ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ လမ်းမတော်ရဲစခန်းဘေးရှိ အမှိုက်ပုံမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဖြစ်စဉ်ကို ရန်ကုန်မြေအောက်တော်လှန်ရေး အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Shadow အဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် စစ်အုပ်စုတပ်တွေ အထိအခိုက်တော့ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဒေသခံတွေထံက စုံစမ်းသိရပါတယ်။ unicode လမျးမတျောရဲစခနျးဘေးက ဗုံးပေါကျခဲ့တဲ့ … Read more
ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းပိုင်းတွင် စ က စ ယာဉ်တန်းမိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး စစ်ကား ၄စီးထိမှန် အပျောက်များနိုင်(ရုပ်/သံ)
ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တန်းမိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး စစ်ကား ၄စီးထိမှန် အသေအပျောက်များနိုင်(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မှ လာသည့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တန်းကို ငွေကမ္ဘာမင်း ဆီဆိုင် အနီးတွင် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီ ၃ဝမိနစ်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ ၃ဖွဲ့က မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်ကား ၄စီးထိမှန်ကာ အသေအပျောက်များနိုင်ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သော One Star Task Force၊ Monywa Truth of Force၊ Triple Two တပ်ဖွဲ့တို့က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း … Read more
အပန်းဖြေ လှေတွေပေါ် ကျောက်ဆောင်ပြိုကျလို့ ၇ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး
ဘရာဇီးမှာ အပန်းဖြေ လှေတွေပေါ် ကျောက်ဆောင်ပြိုကျလို့ ၇ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး —People’s Spring ဘရာဇီး နိုင်ငံက ရေတံခွန် တစ်ခုမှာ အပန်းဖြေ လှေငယ်တွေပေါ် ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခု ပြိုကျပြီး လူ ၇ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မီနက်စ်ဂီရိုင်စ် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရေအိုင်တစ်ခုမှာ ရေတံခွန်တွေ စီးကျပြီး သဘာဝ ရှုခင်း လှပတာကြောင့် လာရောက် အပန်းဖြေသူတွေ စည်ကားနေလေ့ ရှိပါတယ်။ ရေအိုင်ထဲမှာ လှေငယ်လေးတွေ စီးနင်းပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ စုဝေးနေချိန်မှာ ဧရာမ ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခု ပြိုကျလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လှေတစ်စီးပေါ်က ရိုက်ယူထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှာတော့ ကျောက်ချပ်ကြီး တစ်ချပ်ဟာ အောက်တည့်တည့်က လှေတွေပေါ် တည့်တည့် ပိကျသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် လူ … Read more
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အသေအပျောက်များခဲ့တဲ့ လွိုင်ကော်တိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ)
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အသေအပျောက်များခဲ့တဲ့ လွိုင်ကော်တိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ) လွိုင်ကော်၊ ဇန်နဝါရီ ၉ လူငယ့်ခေတ် မနေ့က ဇန်နဝါရီ ၈ရက်နေ့မှာ လွိုင်ကော်မြို့တွင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့ မိုင်းလုံးရပ်ကွက်၊ ရွာတန်းရှည် ၊၅မိုင် ၊ ၆မိုင် ၊ဒေါပိုးစီ နဲ့ ဒီးမောဆို့မြို့တို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က အထိနာခဲ့တာပါ။ နေ့လည်ပိုင်းထဲကစပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လွိုင်ကော်ကို လေကြောင်းကနေ လေယာဉ်၊ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်မှာတော့ လွိုင်ကော်ကို လာပစ်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ကို ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားများ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF)က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်အပြင် တင့်ကားတွေပါ သုံးပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ တင့်ကားတစ်စီးကို ဖျက်စီးနိုင်ခဲ့သလို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ လက်နက်တွေကိုပါ KNDF က … Read more
ရင်နင့်အောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွံ့အသွားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်
ပရဟိတသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်အောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်လေးတစ်ခုပေါ့။ အသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဆီ ညနေပိုင်း ဖုန်းတစ်ကော ဝင်လာတယ်။ “အစ်ကိုတို့ လိုက်ပို့နေကျ ညီမသားလေးကို ကလေးဆေးရုံကနေ သန်လျင်ကအိမ်ကို ပြန်ချင်လို့ ကူညီပေးပါဦး” ဆိုပြီး လူနာ ကလေးလေး ရဲ့အမေက အကူအညီလှမ်းတောင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း လမ်းကြောင်းလိုက်သွားရင်း ဆေးရုံရောက်တော့ လူနာကလေးလေးကို တွေ့တယ်။ ကိုယ်တို့အသင်းကားကိုလည်းမြင်ရော ဝမ်းသာမျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေတာ။ ကားပေါ်တင်ပေးဖို့ အနားရောက်သွားတော့ကလေးက သူ့ခြေထောက်ကို အောက်ကိုချပြီး တရိုတသေနဲ့ လက်အုပ်ကောက်ချီတယ်။သေချာကြည့်လိုက်တော့… မြင်ကွင်းက နင့်ကနဲ ညာဘက်ပေါင်တစ်ချောင်း မရှိဘူး။ ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ ခေါင်းမှာ ဆံပင်တွေမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ ကားပေါ်တင်ပေးတော့ “ဦးရေ ကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းပေးပါနော်။ သား ခြေထောက်က နာလို့ပါ”တဲ့။ စိတ်ချနော်သား ဦးတို့ကားကို သားမနာကျင်ရအောင် မောင်းပေးမယ်၊ငြိမ်ငြိမ့်လေးစီးပြီးသာလိုက်ခဲ့ လို့ပြောရင်း လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေ ယူတယ်။ သားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ … Read more
မန္တလေးတွင် မြဝတီမင်းကြီး သံလမ်းအနီးတွင် စစ်တပ်ရိက္ခာသယ်ရထား မိုင်းဆွဲခံရပြီး နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်သံများကြားရ (ရုပ်/သံ)
မန္တလေးတွင် မြဝတီမင်းကြီး သံလမ်းအနီးတွင် စစ်တပ်ရိက္ခာသယ်ရထား မိုင်းဆွဲခံရပြီး နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်သံများကြားရ (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၉ မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီဝန်းကျင် မြဝတီမင်းကြီးသံလမ်းအနီး စစ်တပ်ရိက္ခာသယ်ရထား မိုင်းဆွဲခံရပြီး နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်သံများကြားရကြောင်း ဒေသခံများက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ပြောဆိုသည်။ “မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနားမှာ အပြန်အလှန်ပစ်နေကြတယ်။ ဗုံးတွေလည်း ကွဲ ပါတယ်။ ၅လုံးလောက်ရှိနေပြီ။ နေရာက မန္တလေး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြိုကနယ်၊ မန္တလေး-မေမြို့ ရထားသံလမ်းနားမှာ ဖြစ်နေတာ” ဟု‌ မန္တလေးမြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။ မြ၀တီမင်းကြီးလမ်းအနီးရှိ ရဲစခန်းအတွင်းမှလည်း ပစ်ခတ်သံများ ဆက်တိုက်ကြားရကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုကြပြီး ပစ်ခတ်မှုအခြေအနေနှင့် အထိအခိုက်အသေအပျောက်မသိရသေးကြောင်း၊ ယနေ့ မန္တလေးတစ်မြို့လုံး စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရှိရသည်။ မန္တလေး မြေပြင်ကင်းထောက်Vomdy၏သတင်းများအရ … Read more
ဒေါ်စုလို အရည်အချင်းမျိုး နောင်ဆယ်သက်တောင် မလွယ်ဘူး”လို့ မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက
ဒေါ်စုလို အရည်အချင်းမျိုး နောင်ဆယ်သက်တောင် မလွယ်ဘူး”လို့ မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ အကြွေးနွံနစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုလိုအရည်အချင်းမျိုး ဦးဇင်းအနေနဲ့ ဒီတစ်သက်မပြောနဲ့ နောင်ဆယ်သက်တောင်မလွယ်ဘူးလို့ မိန့်လိုက်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက အရှင်ဘုရားရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ကြည့်တော့ ဒေါ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် စောဒကတက်တာ၊ ထောက်ပြ ဝေဖန်တာ တစ်ခုမှ မတွေ့ရပါဘူး ဘုရား ဘာကြောင့်ပါလဲ အရှင်ဘုရား ဒေါ်စု လုပ်တာတွေအားလုံးကို ထောက်ခံသလား ဘုရား။ မထောက်ခံတာ တစ်ခုမှပဲ မရှိတာလား။ ဒီလိုမေးလို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘုရား။ မဆိုးပါဘူး ဒကာ။ ခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ပြောရရင် ” အရှင်ဘုရားက ဒေါ်စု ( crazy ) ခရေဇီလား? ဒေါ်စု လော်ဘီ ( lobbyist ) လား?ပေါ့။ … Read more